Semalt: Iiplagi ze-WordPress ozifunayo Xa udala isiqulatho esihle
I-Wordpress yiwebhusayithi efanelekileyo kunye nokusetyenziswa kwehlabathi. I-Wordpress ibamba ngaphezulu kwekota yesayithi yehlabathi. Kubasebenzisi be-WordPress, kukho iiplagi eziliqela ezingama-44,000 ongayifaka. Iwebhusayithi ye-Wordpress inekhono eliphezulu ngenxa yeenkqubo eziphathekayo zolawulo lwezinto ezisetyenziswayo - klettverschluss meterware polyester. Amashishini ahlukeneyo ayazi into ebalulekileyo yokuphuhlisa ukuthengisa kwabo kwiindawo kunye nemisebenzi ephumelelayo yokuCommerce.
uRoss Barber, oyingcali ehamba phambili Semalt , uqinisekisa ukuba ngeendlela ezintsha zokuthengisa (digital) , ukudala imixholo yindlela entsha abantu abayisebenzisa ukubeka ulwazi oluxabisekileyo kwiiblogi zabo website
Ukubambisana kokubambisana kuyimfuneko ebalulekileyo kuyo yonke imenenja yewebhu. Uninzi lwezinto zewebhusayithi ye-WordPress zilawulwa ngokusebenzisa iiplagi kunye nokuphuculwa kwedeshibhodi. Nangona kunjalo, ukudala umxholo yinto enye efuna isenzo esahlukileyo. I-Google yamemezele ukuba ukubaluleka komxholo kuyimfuneko ebalulekileyo enceda iiwebhusayithi kwindawo yazo ngezizathu ezithile. Ubungakanani kunye nemigangatho yamanqaku ngumxholo wendalo yendalo. Kubalulekile ukuhlakulela umxholo wombulali onokukhawuleza inkqubo yokubeka iwebhusayithi yakho. Kukho iiplagizi ezininzi ze-WordPress ongayisebenzisa ukudala umxholo wokubulala. Ekugqibeleni, kufuneka ukwazi ukubona i-plugin ye-WordPress ifanelekile kwiwebhusayithi yakho.
Le plugin ikunceda ukuba ubale amagama kunye negama elingundoqo. Kwakhona kunceda ukuvavanya uhlalutyo lokufunda kwiwebhu lakho. I-Word Stats iplagin ivumela abantu abaqhuba iblogs kunye ne-eCommerce websites ukuba benze imenyu yokuhlalutya ngeelwimi, into ebonisa ukuba umxholo wenkcazelo yakho ibaluleke kangakanani. Unokwandisa iwebsite yakho kwi-SERP ngokusebenzisa le thuluzi. Ithuluzi le robot linolwazi olufana nokubonakaliswa kwemifanekiso yempendulo yegama elingundoqo, izithuba eziphukileyo kunye namazwi angundoqo angama-20 ayenzayo. Abantu abaninzi banenzuzo ngokuphucula ukusetyenziswa kwamagama abo asetyenziswa kwi-niche yabo.
Esi sixhobo siyi-plugin ye-Search Engine Optimization (SEO). Inceda ekwenzeni imisebenzi efana nokutshekisha umxholo wokuphindaphinda, ukujonga ukunyamezela kunye nokukhangela izixhumanisi eziphukileyo. Ezinye i-webmasters zisebenzisa le thuluzi ukuthelekisa ubunzima begama elingundoqo kunye neenkalo zokwenza udidi lweentlobo ezahlukeneyo zeencoko. Kukho ukhetho lokutshekisha amathegi e-meta yiphina iphepha lewebhu. Xa uqala ukwenza iwebhusayithi yakho ye-WordPress, kucacile ukuba akukho ncwadana okanye isongezelelo esinokukunceda ekuphuhliseni. UkuPhakamisa iPoO plugin kunokukunceda uhlaziye umgangatho womxholo wakho wenze iposi yakho yewebhu ehambelana nabaphulaphuli bakho. Ukongezelela, unokukwazi ukufumana izikhonkwane eziphukileyo kwiwebhusayithi yakho yokusebenza.
Le plugin ngumphathi oyintloko wezithuba zeblogi. Kunokwenzeka ukuba abantu babone zonke izikhundla zabo kunye nokuwadonsa kwiindawo zabo. Xa udala umxholo wewebhusayithi, ufumana ngaphezulu kunokuba umntu angakhohlwa ukubeka eceleni i-plugin yokulawula iibhotile zeblogi. Ikhalenda yokuHlaziya inokukunceda ugcine ukuqhubeka komxholo omtsha kubafundi bakho. Le iplagi idonsa kwaye idibanise iimpawu ezingakunceda ufikelele kwimo yembho nganye, jonga zonke izithuba kunye nokulawula izithuba ezivela kwabanye ababhali.